EKhanada: Ilali yamaInuit eKangirsuk kumntla weQuebec
Ukufikelela Bonke Abantu BaseKhanada
Ividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? iguqulelwe ngeelwimi ezisibhozo zomthonyama ukuze kuncedwe abantu abakwintsimi ephantsi kwesebe laseKhanada. Kwiphulo leentsuku ezilishumi laseNunavik Arctic elalingo-Oktobha 2014, le vidiyo yaboniswa ngesi-Inuktitut kuyo yonke imizi ekwimimandla eyi-14 nenabantu abangaphezu kwe-12 000.
Umphathi Wayengawuvali Umlomo
NgoSeptemba 2014, indibano yezizwe ngezizwe eyayiseSeoul yayibanjelwe eSangam World Cup Stadium eMzantsi Korea. Abantu ababephulaphule loo ndibano babengaphezu kwe-56 000. Umphathi weli bala lemidlalo wathi uyithande gqitha intsebenziswano nendlela abeziphethe ngayo amaNgqina kuloo ndibano. Wathi: “Wonke umntu ebeziphethe kakuhle. Ndamangala xa ndibabona belicoca bhetele eli bala kunabantu esibaqeqeshileyo. Akwaba nabantu bethu bebewenza njengamaNgqina umsebenzi wabo. Ukuba sinqula ngendlela efanelekileyo, simele sifane namaNgqina kaYehova.”
EMzantsi Korea: Indibano yezizwe ngezizwe ka-2014 eSeoul
UYehova Usenze Sayilungela INkundla
NgoMeyi 2012, urhulumente waseSweden wasikhaba ngaw’ omane isicelo samaNgqina kaYehova sokuba afumane iingenelo ezifunyanwa zezinye iicawa ngokuphathelele imibandela yemali. IQumrhu Elilawulayo lasamkela isigqibo sokuba kubhenwe kwiNkundla Yolawulo Ephakamileyo.
Le Nkundla yagqiba ekubeni ikhe iliphulaphule eli tyala ngaphambi kokuba yenze isigqibo. Abazalwana abahlukahlukeneyo abasuka kumazwe ngamazwe badibana ukuze baxoxe ngendlela abaza kuyiphendula ngayo imibuzo esenokubuzwa apho. Badibana kwiHolo yoBukumkani eseStockholm.
Besaxoxa njalo, kwankqonkqozwa emnyango. Xa umzalwana evula, kwakumi amantombazana amabini, enye ineminyaka eyi-13, eyenye iyi-14, aza azichaza amagama. Athi afuna ukubuza ngamaNgqina kaYehova. Lo mzalwana uthi, “Ndandifuna ukuwaxelela ukuba abuye ngenye imini, kuba sasixakekile futhi sishiywa lixesha, sasingafuni kuphazanyiswa.”
Nakuba kunjalo, umzalwana wabona ukuba makakhe athethe nawo. Ayenemibuzo emininzi, eminye yayo yayiphathelele izinto zentlalo nokuvota. Emva koko, lo mzalwana wabuyela kwabanye abazalwana waza wabaxelela izinto ebezibuzwa ngala mantombazana nendlela awaphendule ngayo.
Ngosuku olulandelayo xa babesenkundleni, abazalwana bamangaliswa yimibuzo eyayibuzwa kuba emininzi yayo yayifana naleyo yayibuzwe ngala mantombazana. Umzalwana owayemele intlangano uthi: “Ndandizolile nakubeni ndandisoyika, kuba ndandimi phambi kwamagqwetha eli lizwe aphum’ izandla. Kodwa ndaqonda ukuba uYehova unathi kuba izolo uye wasenza sayilungela imibuzo yenkundla.”
INkundla yaba kwicala lethu, yaza yabuyisela eli tyala kurhulumente ukuze asitshintshe isigqibo sakhe.
Ibhegi KaKen Yerayisi
UKen, oneminyaka emithandathu uhlala eHaiti. Wavuya akuva ukuba ibandla lakowabo liza kwakha iHolo yoBukumkani entsha. Wagqiba ekubeni azenzele ibhokisi yomnikelo aze ayifihle egumbini lakhe. Endaweni yokuba athenge ukutya esikolweni ngemali ayiphiwe ngabazali bakhe, wayeyifaka kuloo bhokisi. Waqhubeka eyifaka de kwafika iqela labazalwana noodade elalize kwakha loo Holo. Walinika ibhokisi yakhe, yaye imali eyayilapho yathenga ibhegi enkulu yerayisi. Iintsuku ezininzi kwakutyiwa loo rayisi kaKen esakhiweni emva kwemini.
Phantse wonke lo nyaka uphelileyo, kwakufuneka umntu oza kungena kwimimandla ekungangenwayo kuyo eSierra Leone ngenxa yokuba kugqugqisa iEbola afumane imvume. Ngokomzekelo, abaveleli besiphaluka kwakufuneka bafumane iibheji namaphepha-mvume okuba iimoto zabo zingene kuloo mimandla, kwaneelori ezinkulu ezazihambisa iincwadi neeleta. Abazalwana noodade abakwiKomiti Yokunceda Ngexesha Lentlekele kwakufuneka baphathe izixhobo zokuhlola iqondo lobushushu, ibleach nokutya. Eyona nto imangalisayo kukuba, zange khe basokoliswe ngamaphepha afunekayo.
Nanga amanye amava awayeluqinisa ngokwenene ukholo. Abazalwana bafaka isicelo seebheji eziyi-34 namaphepha-mvume eemoto zabo ayi-11, kodwa kwakufuneka badibane nomphathi wamajoni kuba nguye owayeza kusamkela eso sicelo. Ngosuku ababecinga ukuba bafanele bazifumane ngalo ezo bheji naloo maphepha-mvume, abazalwana ababini abasuka kwiofisi yesebe baya kulo mphathi. Xa befika, isicelo sabo sasingabonakali. Bacelwa ukuba bazikhangelele kwintaba yezicelo eyayilapho, kodwa zange basifumane. Kanye ngelo xesha, umphathi waxelela unobhala wakhe ukuba uyavala ngoku, kwaye zonke izicelo ziya kujongwa emva kweeveki ezimbini. Bethe cwaka, abazalwana bacela uncedo kuYehova. Emva koko lo mphathi wabajonga waza wababuza, “Nifuna iibheji namaphepha-mvume amangaphi?” Xa bamxelelayo, waphakama esitulweni waza ethethela phezulu wathi, “Amaninzi kangaka?”
Abazalwana bamxelela ngomsebenzi wethu nendlela izinto zokunceda abaziphetheyo ezibanceda ngayo abantu abane-Ebola. Wakha wathi cwaka, wajonga unobhala wakhe, waza wathi, “Banike yonke into abayifunayo.”
EGuinea naseSierra Leone: Kuzo zonke iiHolo zoBukumkani kwakuhlanjwa izandla ukuze zingabi nazintsholongwane